Wararka Maanta: Khamiis, May 10, 2012-Wasiirro ka socday Koonfur Afrika iyo Musambiik oo Muqdisho booqday hadalna ka jeediyay Shirka Odayaasha-dhaqanka
Kulanka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu la qaatay wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka ee dalka Koonfur Afrika, Jeffrey Radebe, safiirka Koonfur Afrika u fadhiya Nairobi, Didumusi Ntushinga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Musambiik, Edwardo iyo wafuud kale oo ay hogaaminayaan ayuu kala hadlay xiriirka dowladahooda iyo Soomaaliya ka dhexeeya iyo sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka Qoxootiga Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ku nool.
Wafuudda ayaa markaas kaddib waxay soo mareen goobtii halka uu ka socdo shirka odayaasha-haqanka Soomaaliyeed kaasoo lagu soo xulayo guddiga ka kooban 825-ka xubnood ee ansixinaya dastuurka Soomaaliya soona xulaya xildhibaannada uu dalku yeelanayo.
Wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka Koonfur Afrika ayaa qudbad u jeediyay odayaasha, isagoo u sharaxay dastuurka Koonfur Afrika ee 1994-kii kaasoo uu sheegay in loo sameeyay ergo sidan oo kale ansixisa, balse 1996-kii ay codkooda u qaadeen dadka Koonfur Afrika. Isagoo odayaasha ugu baaqay inay muhiimad weyn siiyaan dastuurka ayna ogaadaan qiimaha uu leeyahay, wuxuuna ku bogaadiyay odayaasha inay hormuud ka noqdaan dadaallada Soomaaliya.
Kulanka kaddib ayaa waxaa si wadajir ah saxaafadda ula hadlay ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka Koonfur Afrika. Iyadoo ra’iisul wasaaruhu uu u sheegay saxaafadda sheegay in dowladaha Koonfur Afrika iyo Musambiik ay ka wada-hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo iyaga u dhexeeya.
"Sidaa la socotaan Koonfur Afrika waa dalka ku caan baxay soo celinta nabadda; sababtoo ah waxay ahaayeen dal uu ka jiray midab-takoor kaddibna xornimo helay; marka qibradii ay wadankooda ku nabadeeyeen ayay go'aansadeen inay innagana nagu caawiyaan si aan dalkeenna ugu nabadeyno," ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Ugu dambeyn, ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in sidoo kale dalka Musambiik uu soo maray dagaal sokeeye oo dhexdooda ah kaasoo qaatay 16-sano kaddibna ay ka baxeen dagaaladii sokeeye, wuxuuna xusay inay rabnaa in inagoo qibradaas ka faa'iideysanayna aan xilligaan xasaasiga ah dalkeenna ku nabadeyno.
Wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka Koonfur Afrika, Jeffrey Radebe oo isna la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in Soomaaliya uu ugu mahad-celinayo taageeridii ay siiyeen dalkeena xilligii midab-kala-sooca, isagoo sheegay in lagu garab-siiyay inay helaan xuquuqdeena. Isagoo sheegay in Soomaaliya loogu tababaray sannadkii 1970-kii qaar ka mid ah dadkii xorriyada Koonfur Afrika u dagaalamayay.
"Madaxweynaheennu wuxuu ballan-qaaday inuu ku caawiyo Soomaaliya 100-million oo lacagta Koonfur Afrika ah, taasoo lagu dhisayo hay’adaha dowladda iyo sidii kor loogu qaadi lahaa tayeynta shaqaalaha dowladda iyo waliba xoojinta xiriirka labada dal," ayuu yiri Radebe.
Ugu dambeyn, ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa saxaafadda u sheegay in dib loo furayo safaaraddii Soomaaliya ee Koonfur Afrika isla markaana ay kala hadlayaan dhibaatooyinka loo geysto dadka Soomaaliyeed ayna heli doonaan xuquuqdooda.